ကာကွယ်ဆေး ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ မည်သည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားမဆို ပီဆို ၁၀ သန်း ( ကန်ဒေါ်လာ ၂ သိန်းကျော်) ချီးမြှင့်မှုနဲ့ အတူ ၊ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့အစိုးရ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ထုတ်ရောင်းမည်ဟု သမ္မတ ဒူတာတေး ပြောပြီ - Thu Ta Myay
Home/International/ကာကွယ်ဆေး ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ မည်သည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားမဆို ပီဆို ၁၀ သန်း ( ကန်ဒေါ်လာ ၂ သိန်းကျော်) ချီးမြှင့်မှုနဲ့ အတူ ၊ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့အစိုးရ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ထုတ်ရောင်းမည်ဟု သမ္မတ ဒူတာတေး ပြောပြီ
ကာကွယ်ဆေး ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ မည်သည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားမဆို ပီဆို ၁၀ သန်း ( ကန်ဒေါ်လာ ၂ သိန်းကျော်) ချီးမြှင့်မှုနဲ့ အတူ ၊ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့အစိုးရ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ထုတ်ရောင်းမည်ဟု သမ္မတ ဒူတာတေး ပြောပြီ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အနေ နဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး ဈေးကွက်ကို ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ၀ယ်ယူနိုင်ဖို့ အတွက် ပိုင်ဆိုင်မှု အချို့ ကို ထုတ်ရောင်းဖို့အသင့်ပြင် ထားကြောင်း သမ္မတရဲ့ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဟယ်ရီရိုကွေ က သောကြာနေ့ မှာ ပြောဆို ပါ တယ် ။COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ၀ယ်ရပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ မိမိတို့ အနေ နဲ့ အစိုးရပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ကို ရောင်းထုတ်ပြီး နိုင်ငံသားတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးတွေ ၀ယ်သွားမှာပါလို့မစ္စတာရိုကွေက နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံ PTV-4 မှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာထက် လူ့အသက် ကို အရင် ဦးစားပေးရမယ် ဆိုတာ သမ္မတကြီးရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ၄င်းက ပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီကြီး Pfizer နဲ့ ယင်းရဲ့ ဂျာမန်မိတ်ဖက် BioNTech တို့ က စမ်းသပ်ေ န ခဲ့တဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး လေးမျိုး အနက် ပထမတစ်မျိုးဟာ အားတက်ဖွယ် ရလဒ်ကောင်းတွေ ထွက် ထား တယ် လို့ထုတ်ပြန်ချက် မှာ မစ္စတာ ရိုကွေက ပြောဆို ပါ တယ်။
ကနဦး တွေ့ရှိချက် များ အရ ကာကွယ်ဆေးဟာ ခုခံအားစနစ် တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေကာ ဗိုင်းရပ်စ် ကို တိုက်ဖျက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကို အသင့်ဖြစ်နေစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ China National Biotec Group (CNBG) ကလည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုး ရဲ့ အစောပိုင်းအဆင့် လူသားမှာ စမ်းသပ်မှုဟာ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ ရလဒ်တွေ တွေ့ရှိထားတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လမှာ ကြေညာခဲ့ ပါတယ် ။သမ္မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေး ဟာ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ထောက်ခံကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြောဆိုထားခဲ့ကာ မကြာခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးမှာလည်း ယင်း ကိစ္စကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုထားခဲ့ ပါတယ် ။
Police personnel hold up placards reminding people to stay at home amid concerns of the spread of the COVID-19 coronavirus in Manila on March 31, 2020. – The main Philippine island of Luzon, home to 55 million people which includes the capital Manila, is in the second week ofalockdown to contain the spread of the disease. (Photo by Maria TAN / AFP)
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ မည်သည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသား မဆို ပီဆို ၁၀ သန်း ( ကန်ဒေါ်လာ ၂ သိန်းကျော်) ချီးမြှင့်မယ်လို့ဒူတာတေးက ကမ်းလှမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေး တွေ့ရှိပြီး အများပြည်သူကို ထုတ်ရောင်းပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ကွာရန်တင်း သတ်မှတ်မှုတွေနဲ့ ကန့်သတ်ချက် အားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးသွားမယ်လို့ လည်း သမ္မတ က ကတိပေးခဲ့ ပါတယ်။
ကာကှယျဆေး ဖျောထုတျနိုငျတဲ့ မညျသညျ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသားမဆို ပီဆို ၁၀ သနျး ( ကနျဒျေါလာ ၂ သိနျးကြျော) ခြီးမွှငျ့မှုနဲ့ အတူ ၊ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေးဝယျဖို့ အစိုးရ ပိုငျဆိုငျမှုတှေ ထုတျရောငျးမညျဟု သမ်မတ ဒူတာတေး ပွောပွီ
ဖိလဈပိုငျနိုငျငံ အနေ နဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျဆေး ဈေးကှကျကို ရောကျပွီဆိုတာနဲ့ ဝယျယူနိုငျဖို့အတှကျ ပိုငျဆိုငျမှု အခြို့ ကို ထုတျရောငျးဖို့ အသငျ့ပွငျ ထားကွောငျး သမ်မတရဲ့ ပွောရေး ဆိုခှငျ့ရှိသူ ဟယျရီရိုကှေ က သောကွာနမှေ့ာ ပွောဆို ပါ တယျ ။COVID-19 ကာကှယျဆေး ဝယျရပွီဆိုတဲ့ အခြိနျမှာ မိမိတို့အနေ နဲ့ အစိုးရပိုငျဆိုငျမှုတှေ ကို ရောငျးထုတျပွီး နိုငျငံသားတှအေတှကျ ကာကှယျဆေးတှေ ဝယျသှားမှာပါလို့ မစ်စတာရိုကှကေ နိုငျငံပိုငျရုပျသံ PTV-4 မှာ ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ ပစ်စညျးဥစ်စာထကျ လူ့အသကျ ကို အရငျ ဦးစားပေးရမယျ ဆိုတာ သမ်မတကွီးရဲ့ ရပျတညျခကျြဖွဈကွောငျးလညျး ၎င်းငျးက ပွောဆိုပါတယျ။အမရေိကနျ ဆေးဝါးကုမ်ပဏီကွီး Pfizer နဲ့ ယငျးရဲ့ ဂြာမနျမိတျဖကျ BioNTech တို့က စမျးသပျေ န ခဲ့တဲ့ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး လေးမြိုး အနကျ ပထမတဈမြိုးဟာ အားတကျဖှယျ ရလဒျကောငျးတှေ ထှကျ ထား တယျ လို့ ထုတျပွနျခကျြ မှာ မစ်စတာ ရိုကှကေ ပွောဆို ပါ တယျ။
ကနဦး တှရှေိ့ခကျြ မြား အရ ကာကှယျဆေးဟာ ခုခံအားစနဈ တုံ့ပွနျမှုဖွဈပျေါစကော ဗိုငျးရပျဈ ကို တိုကျဖကျြဖို့ ခန်ဓာကိုယျကို အသငျ့ဖွဈနစေတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ တရုတျနိုငျငံရဲ့ China National Biotec Group (CNBG) ကလညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကာကှယျဆေးတဈမြိုး ရဲ့ အစောပိုငျးအဆငျ့ လူသားမှာ စမျးသပျမှုဟာ အပေါငျးလက်ခဏာဆောငျတဲ့ ရလဒျတှေ တှရှေိ့ထားတယျလို့ ပွီးခဲ့တဲ့လမှာ ကွညောခဲ့ ပါတယျ ။သမ်မတ ရိုဒရီဂို ဒူတာတေး ဟာ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး ထုတျနိုငျရေး ကွိုးပမျးမှုတှကေို ထောကျခံကွောငျး အကွိမျကွိမျ ပွောဆိုထားခဲ့ကာ မကွာခငျက ပွုလုပျခဲ့တဲ့ အာဆီယံ ထိပျသီးမှာလညျး ယငျး ကိစ်စကို ထုတျဖျော ပွောဆိုထားခဲ့ ပါတယျ ။
ကိုဗဈကာကှယျဆေး ရှာဖှဖေျောထုတျနိုငျတဲ့ မညျသညျ့ ဖိလဈပိုငျနိုငျငံသား မဆို ပီဆို ၁၀ သနျး ( ကနျဒျေါလာ ၂ သိနျးကြျော) ခြီးမွှငျ့မယျလို့ ဒူတာတေးက ကမျးလှမျးထားခဲ့ပါတယျ။ ကာကှယျဆေး တှရှေိ့ပွီး အမြားပွညျသူကို ထုတျရောငျးပွီဆိုတဲ့ အခြိနျမှာ ကှာရနျတငျး သတျမှတျမှုတှနေဲ့ ကနျ့သတျခကျြ အားလုံးကို ဖယျရှားပေးသှားမယျလို့လညျး သမ်မတ က ကတိပေးခဲ့ ပါတယျ။
ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအတွက် မြွေကိုလည်ပင်းမှာပတ်ပြီး မြို့ပတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
မကြာခင်မှာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတော့မယ့် သိန်းဆယ်ချီတန် Face Shield
ကိုဗစ် ထက် ပိုပြီး ကမ္ဘာ ကို ဒုက္ခပေးနိုင် ဖွယ် ရှိနေ တဲ့ G4 ဗိုင်းရပ် စ် တရုတ်နိုင်ငံ မှာ တွေ့ရှိ